Madasha Xisbiyada qaran oo eedayn usoo jeedisay Dowladda Itoobiya. - Tilmaan Media
Madasha Xisbiyada qaran ee dalka ayaa war ay soo-saareen waxay ku taageereen codsigii 13-dii-May ee sanadkaan ee Golaha ammaanka ee Qaramada midoobe kaas oo ku saabsanaa in ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsaneyn howl-galka midowga Afrika ee Soomaaliya laga saaro waddanka.
Warka kasoo baxay axsaabta midoobay ee mucaaradka ah ayaa waxaa lagu yiri “ Madashu waxay aad ugu mahad-celineysaa in la caddeeyay tirade rasmiga ah ee Ciidamada howl-galka midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya oo gaaraya 19,226 askari”.
Madasha xisbiyada ayaa sidoo kale sheegay in ay u muuqato in lagu xad-gudbay madax-bannaanida dalka, qaranimada iyo cuna-qabateyntii Soomaaliya la saaray sanadkii 1992-dii.
Qoraalkaan oo ah mid ku socday beesha caalamka ayaa waxaa lagu xusay in Il gaar ah lagu hayo fara-gelin la sheegay in Itoobiya ay ka waddo Soomaaliya.